Khamiista ayaa loo aqoonsaday tiradii ugu badneyd ee hal maalin dhinta Gobolka Woodbury oo wali | KWIT
Si kastaba ha noqotee, shirkeeda maalinlaha ah ee coronavirus news news, Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu ku difaacay go'aankeeda u oggolaanaya degmada Woodbury inay furto qaar ka mid ah ganacsiyada tafaariiqda.
Reynolds wuxuu sheegay inay ku shaqeyn doonaan boqolkiiba 50 awooda. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dukaanleyda loo baahan yahay inay sii wadaan ku celcelinta mashquulinta bulshada.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo wariyey 655 kiis oo dheeri ah oo COVID-19 ah in kabadan 11,000 oo kiis oo la xaqiijiyay.
Waxaa jira dhowr iyo toban dhimasho dheeraad ah oo wadarta ah 231.
Gobolku wuxuu beddelay waqtigiisii ​​warbixinta, sidaa darteed tirooyinki ugu dambeeyay waxay metelaan qiyaastii hal-iyo-bar-maalmood xogta la qiimeeyo.
Tyson Foods ayaa dib u fureysa Dakota City, Nebraska, warshad hilibka lo'da Khamiista ka dib markii la xiray xarunta ka dib kiisas badan oo shaqaalaha ka mid ah.
Tyson ayaa xidhay warshada jimcihii wuxuuna marka hore qorsheeyay in dib loo furo afar maalmood laakiin taas gadaal ayuu u riixay ka dib markii uu sugayay natiijooyinka tijaabada.
Warshadda waxaa ka shaqeeya 4,300 oo qof.
Magaalada Sioux City waxay xireysaa xarumaha. Magaaladu wali waxay ku jirtaa ganacsiga, laakiin dhismayaasha maxalliga ah iyo jardiinooyinka ayaa weli ah kuwa laga xadiday dadweynaha. Hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ayaa dib u eegi doona siyaasadooda May 15-keeda.
Dhaqdhaqaaqe bulshada muddo dheer ah oo lagu yaqaanay shaqadeeda caawinta soogalootiga ayaa dhintey.
Hong-Cuc Thi Nguyen (oo ah kaar shaaha laga cuno) wuxuu ahaa u doode bulshada Vietnamese.
Kuwa ku dhow Hong-Cuc waxay yiraahdeen sannadihii ugu dambeeyay waxay ahayd mid liidata. Qof daryeele ah ayaa u sheegay telefishanka KMEG inay xanuunsatay bilowgii toddobaadkan wuxuuna dhintay galabnimadii Arbacada. Waxay iska tijaabisay COVID-19.
Nguyen, oo u dhalatay Vietnam, ayaa Mareykanka timid 1981-kii. Waxay heshay abaalmarino badan shaqadeeda.
Nguyen wuxuu jiray 87 sano jir.